လာမယ့် ၂၀၂၂ နွေဦး ကုန်တာ နဲ့ ပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ် Kia Stinger ! – MyMedia Myanmar
လာမယ့် ၂၀၂၂ နွေဦး ကုန်တာ နဲ့ ပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ် Kia Stinger !
တကယ်လို့ သင်ဟာ Kia Stinger ကားကောင်း တစ်စီးကို ဝယ်ယူဖို့ အတွက် ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေဆဲ ဆိုရင်တော့ မကြာခင်မှာ တစ်ခုခုကို သေချာဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုလာပါတော့မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Sports Sedan အတော် များများရဲ့ ရောင်းအားတွေက တဖြည်းဖြည်း မရေ ရာ ဖြစ်လာ နေတာကြောင့် Kia Stinger မျိုးဆက်သစ် အတွက် က‌လည်း မသေချာ ဖြစ်လာတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မှန်းဆရ ခက်ခဲနေ သေးပေမယ့်လည်း လက်ရှိ မျိုးဆက် ကားမော်ဒယ် ကတော့ ထင်ထားထက် စောစောစီးစီး သက်တမ်း ကုန်သွားဖို့ရှိနေပြီး တိတိကျကျ ပြောရရင် တော့ လာမယ့် ၂၀၂၂ နွေဦး မှာ နောက်ဆုံး ဖြစ်လာ နိုင်ပါတယ်။
Kia ကတော့ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ အတွင်းက သူတိုရဲ့ ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံ တွေ အတွက်ကို ထုတ်လုပ်ရမယ့် အစီ အစဉ် တွေနဲ့ ပတ က် ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက် နေ့ကပဲ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အစီအစဉ် အရတော့ Stinger ဟာ Gwangmyeong မှာ ရှိတဲ့ Sohari ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံမှာ ထုတ်လုပ် ရမှာ ဖြစ်ပြီး Korean Car Blog ရဲ့ အဆိုအရ စက်ရုံတစ်ရုံဟာ အနာဂါတ် ရဲ့ လျှပ်စစ် ကားမျိုးစုံ ကို ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ပစ္စည်း အသစ်တွေ တပ်ဆင် ကာ အဆင့်မြှင့်တင်ဦးမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အထူး သဖြင့် Carnival Minivan လို ကားမျိုး တွေရဲ့ Hybrid Version တွေကို အဓိကထား ထုတ်လုပ်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ စက်ရုံက ဘယ်စက်ရုံလဲ ဆိုတာကို တိတိကျ ကျ ပြောကြားထားခြင်း မရှိသေးပဲ ပစ္စည်းတွေ ပြန်လည် တပ်ဆင်တာကိုတော့လာမယ့် နှစ် အစောပိုင်း လောက်မှာ စတင်မှာ ဖြစ်တာ ကြောင့် Stinger ရဲ့ ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေဟာ လာမယ့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဒုတိယ လေးလပတ် လောက်မှာ အဆုံးသတ် သွားတော့မှာပါ။
အဆိုပါ သတင်းကြောင့်တော့ အခု Sports Sedan ကား ရဲ့ အနာဂါတ်ဟာ လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်လာခဲ့ရပေမယ့် အတည်ပြုဖို့ ခက်ခဲ သေးတာ ကြောင့် အရမ်းတော့ စိုးရိမ်ဖို့ မလိုသေးပါဘူး။ Stinger အနေနဲ့ ဈေးကွက်တိုင်း မှာ Facelift အသစ်နဲ့ မိတ်ဆက် ပေးထားတာ ဖြစ်ပြီး အမေရိက ဈေးကွက်မှာ ဆိုရင်ယခုနှစ်မှာ အသစ် စက်စက် မြင်ရတာ ပါ။ အခုလိုမျိုး ကားမော်ဒယ်ကောင်း တစ်ရပ်ကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားမှု ကနေ ရုတ်တရတ် ဖြုတ်ချလိုက်ဖို့ ကတော့ ဖြစ်နိုင် ချေနည်းနေသေးတာ ဖြစ်တဲ့အပြင် အဆိုပါ ကားတွေကို တည်ဆောက် ထုတ်လုပ်ရေး အပိုင်းမှာလည်း တောင်ကိုရီးယား တစ်နိုင်ငံ တည်းမဟုတ်တာကို ပြန်ထည့်တွက် သင့်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ Sohari စက်ရုံ ပြန်ဆင် မယ့် အချိန် ကာလ အပိုင်းအခြားက မှန်ကန်ခဲ့မယ် ဆိုရင်တောင်မှ အခြားသော စက်ရုံတွေ ကနေ အရေ အတွက် အနည်းငယ် ကတော့ သေချာ ပေါက် ဆက်လက် ထုတ်လုပ်ပေးလာနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် သေချာတဲ့ တစ်ချက်ကတော့ Stinger ရောင်းအားတွေက သိပ်ပြီး တိုးတက်‌မနေဘူး ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် တုန်းက အမေရိကဈေးကွက် ထဲမှာ အစီး ရေပေါင်း ၁၃,၈၆၁ စီးပဲ ရောင်းချ ခဲ့ ရသလို အခြေအနေ တွေယိုယွင်း နေခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ မှာ ဆိုရင် လည်း အများနည်းတူ ကျဆင်းခဲ့ရကာ အစီးရေ ၁၂,၅၅၆ စီးပဲ ရောင်းချခဲ့ ရပါတယ်။ အခု လက်ရှိ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ လည်း ကားထုတ်လုပ် ရေး တွေမှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Chip ပြား ပြတ်လပ်မှု ပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင် နေရပြန်တာကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ အထိကို ၁၄၇ စီးပဲ ရောင်းချ ထားနိုင် ပါသေးတယ်။ လက်ရှိ အချိန် အမေရိက ဈေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းအား အနည်းဆုံး တောင်ကိုရီးယား ကားတစ်စီး ဖြစ်နေပြီး ဥရောပ ရောင်းအားကတော့ ပိုလိုတောင် ဆိုးနေသေးတာပါ။ ဒီလို ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်တွေအရ ကြည့်မယ် ဆိုရင် တော့လည်း အဆိုပါ မော်ဒယ်ကို လာမယ့်နှစ် မှာ လက်လွှတ်လိုက် တော့မယ် ဆိုတဲ့ Kia ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကဖြစ်လာ နိုင်တယ်လို့ပဲ ယူဆရတော့မှာပါ။
The post လာမယ့် ၂၀၂၂ နွေဦး ကုန်တာ နဲ့ ပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ် Kia Stinger ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-07-21T19:30:44+06:30July 21st, 2021|MYCARS MYANMAR|